Ningchụ obere azụmahịa siri ike na nrụgide. Na-eyikarị ọtụtụ okpu, na-etinye ọkụ, ma na-anwa ịme ka dollar ọ bụla gbasaa ruo ókè o kwere mee.
Are na-elekwasị anya na weebụsaịtị gị, ego gị, ndị ọrụ gị, ndị ahịa gị, na ika gị ma nwee olile anya na ị nwere ike ịme mkpebi dị mma oge ọ bụla.
O di nwute, site na ntuziaka niile ndi nwere obere azumahia na adighi, o siri ike itinye oge na nlebara anya n'ime akara ahia. Agbanyeghị, ịkọwa akara bụ otu akụkụ kachasị mkpa ma ọ bụ azụmaahịa gị ma nwee ike nwee nnukwu ihe gbasara echiche mbụ ị nyere ndị ahịa gị.
Akụkụ buru ibu nke echiche mbụ bụ otu ị si aza ekwentị mgbe atụmanya na-akpọ azụmaahịa gị. Ọtụtụ obere ụlọ ọrụ na-anwa iji sistemụ ekwentị na-abaghị uru dị ọnụ ala ma ọ dị nwute na nke a nwere ike imebi echiche mbụ. Ndị a bụ ụfọdụ ihe m hụrụ ọtụtụ ihe nwere ike ịbụ nsogbu.
1. Iji akara ekwentị gị dịka nọmba ekwentị azụmahịa gị. Ọbụlagodi na ị bụ solopreneur, nke a abụghị ezigbo echiche. Onye ọ bụla nwere ike ịkọ mgbe ha na-akpọ ekwentị, ọkachasị mgbe ọ na-aga ozi olu ma na-enye ekele ozi ozioma ekwenti dị mma. Ọ na - enye ndị na - akpọ oku akara ngosi na - egosi na ị bụ ụlọ ahịa otu nwoke. Onweghị ihe dị njọ na ịbụ ụlọ ahịa otu nwoke mana ịdọrọ uche gaa na ya n'ụzọ a adịghị mma.
2. za ekwentị na “ndewo?” na ọ dịghị ihe ọzọ. Ọ bụrụ na m na-akpọ azụmahịa, m na-atụ anya na onye na-aza ekwentị na-ekwu na azụmahịa aha na-esochi a ọkachamara ekele. Ọ bụrụ na m na-akpọ akara akara ma ọ bụ kpọfere m, ọ dị mma ịhapụ aha azụmaahịa mana m ga-atụ anya ịnụ onye ahụ zara aha ya. Ọ bụ nkwanye ùgwù ọkachamara ma nyere aka ịtọ ụda kwesịrị ekwesị maka mkparịta ụka azụmahịa.
3. Igbe ozi “izugbe”. Mgbe ị kpọrọ azụmahịa ma ọ nweghị onye zara, mgbe ụfọdụ ị na-enweta igbe ozi “izugbe” na enweghị nhọrọ ndị ọzọ? You tụkwasịrị obi na ịhapụ ozi ga-arụpụta nzaghachi? Anaghị m eme ya. Mbụ, nweta onye nnabata (ma ọ bụ dị mma ọrụ na-anabata ndị ọbịa). Ọnọdụ kachasị mma bụ na ndị na-akpọ oku ga-enweta ezigbo mmadụ oge ọ bụla. Ọ bụrụ na ịnweghị onye nnabata, ma ọ dịkarịa ala nye onye na-elekọta onwe gị nke ga-eme ka onye kpọrọ gị chọta onye kwesịrị ịhapụ ozi.
4. Akara nke anaghi anabata ozi olu. Nke a dị njọ karịa igbe ozi izugbe "izugbe". N’oge ụfọdụ, mgbe m kpọrọ azụmahịa ma o nweghị onye zara, aga m ezigara m ozi kelere m ka m hapụ ịhapụ akwụkwọ ozi olu maka na a gaghị enyocha ya. N'ezie? Nke a bụ enweghị nsọpụrụ. Onye ọ bụla na-arụsi ọrụ ike ma ọ bụrụ na m ga-ewepụta oge iji laghachi na nchekwube nke iru mmadụ, enwere m ike ịga n'ihu. Achọpụtala m na ụlọ ọrụ ahụike na-abụkarị ikpe nke a.
5. Ọrụ dị oke ọnụ ala VoIP. Voice over IP dị mma ma ọ dịkwa ogologo oge. Agbanyeghị, ọ ka nwere ike ibute nsogbu ụfọdụ na ogo olu ma nwee ike mepụta ngosipụta ọhụhụ na mkparịta ụka ụzọ abụọ, yana. Maka nke a, ọ naghị adị mma ịdabere na Skype, Voice Google, ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ anaghị akwụ ụgwọ maka usoro azụmaahịa mbụ. Ọ bụrụ na ị ga-aga VoIP ụzọ, ọ ka mma itinye ego na ọkachamara VoIP ihe ga-eme ka ị nweta ọdịyo na ntụkwasị obi. Ihe ole na ole na-enwe nkụda mmụọ karịa ịnwa imechi azụmahịa mgbe ị na-adọga isoro onye ahịa gị kwukọrịta maka ahịrị ekwentị a na-apụghị ịtụkwasị obi.
Ọ naghị ewe nnukwu mbọ iji mepụta ahụmịhe ekwentị ọkachamara maka ndị na-akpọ gị mana ọ nwere ike ịme nnukwu mmetụta na mmetụta mbụ ha nwere mgbe ị na-akpọ oku. Na SpinWeb, anyị achọpụtala na otu nnukwu ndị nnabata + iPhones na-arụ ọrụ nke ọma maka anyị. Ọ bara uru iche echiche etu ọkachamara azụmahịa gị si ada mgbe mmadụ kpọrọ gị.
Tags: Mobile na Mbadamba ụrọChọọ MarketingWordPress
Feb 22, 2011 n’elekere 5:13 nke abali
Mike - ị nwekwara ekwentị, ka ị na-aga iPhones?
Feb 22, 2011 na 6:41 PM
Anyị na-agagharị ihe niile na iPhones. Ọ dịghị nnukwu jọrọ njọ desk ekwentị maka anyị 🙂
Feb 22, 2011 na 7:48 PM
dị mfe ma esoghị.
Feb 24, 2011 na 1:51 PM
Ekwetaghị m na # 1. Mgbe ị na-agba ahịa naanị gị, ọ nweghị ihe dị njọ n'iji ekwentị dị ka isi okwu gị. Ọ bụrụ na ị hazie ekele & debe ya ọkachamara mgbe ị zara ekwentị, enweghị ọdịiche. Ọ dị mma karịa ka ejikọtara gị na ekwentị ma ọ bụ ọnọdụ (ee, ọbụlagodi na teknụzụ na-ebugharị na ihe ndị ọzọ) ma na-enye m ohere ịnye ndị ahịa m ahụmịhe ọrụ ngwa ngwa.
Feb 24, 2011 na 2:37 PM
Ejirila m ekwentị n’afọ ise gara aga. Ana m eji ya n'ihi na ọ bụ akara dị iche na ekwentị m. O nwere ozi di ka azụmahịa, mgbe obula m azara ya, enyi m ma obu azumahia m, asim, Ndewo, nke a bu Lisa Santoro. Amaghị m onye ekwentị ị na-akpọ ma ozi a bụ ihe mgbe ochie.
Feb 28, 2011 na 1:27 PM
Mgbe ị kpọrọ ekwentị ma nweta ozi olu, o doro anya na ọ bụ ekwentị dabere na ekele ozi olu, belụsọ ma ahaziri ya, nke ọtụtụ mmadụ anaghị eme. Ọ bụrụ na ị na-akpọ a azụmahịa nọmba maka ụlọ ọrụ na ọ na-aga ekwentị olu mail, ọ pụrụ ịbụ a ubé ọjọọ mgbaàmà ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ nwere mmasị na-achọ ọkachamara. Businessesfọdụ azụmahịa dị mma na onyogho solopreneur. Arefọdụ adịghị. Daalụ maka nzaghachi! 🙂
onye ọ bụla nwere ike ịkwado ezigbo ọrụ VoIP? nyocha ọ bụla na vocalocity?
LJ, obere ụlọ ọrụ anyị na-eji Ooma (ihe ruru mgbakwunye 4) ma nwee obi ụtọ.